भट्टराईले पार्टी छाड्दा एमाओवादीले के भन्यो ? - Enepalese.com
भट्टराईले पार्टी छाड्दा एमाओवादीले के भन्यो ?
इनेप्लिज २०७२ असोज १० गते १४:२७ मा प्रकाशित
पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर सीमा नाका बन्द गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनका नाममा तराई मधेसमा मारिएका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको साङ्गठनिक विषय र आगामी कार्यदिशा र संविधान लेखन प्रक्रियाका बारेमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
सोमबार पार्टीका सल्लाहकारसहितको पूर्णबैठक बस्ने र नयाँ आधारमा अगाडि बढ्ने विषयमा अध्यक्ष दाहालले ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रवक्ता शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।